Dareenka Guud iyo Rajada wanaagsan ee laga qabo shirka London[QORMO] – SBC
Waa maalin lawada sugaayo dhegtana loo wada taagayo , waa 7may ee sanadka 2013 waa shirka ka dhici doona cariga England caasimadiisa London , waxaa looga arinsandoona arimaha somaaliya , waxaa lagu marti qaaday madax aad u farabadan oo ka kala socda dawlado kala duwan – hay,ado caalami ah sida qaramada midowbey , midowga carabta , midowga Afrika , bangiga aduunka , midowga yurub , midowga bariga afrika , iyo kuwo kale oo aad ufarabadan.
Sida uu ka dhawaajiyey wasiirka u qaabilsan Britain arimaha afrika , ( Mark Simmons) mar uu ka hadlaayey arimaha quseeya shirka London waxaa uu sheegay in shirkaan uu hordhac u ahaa ama qeybtiisii kowaad ay dhacday sanadkii laga soo gudbey ee 2012 , 23 , February , kaas oo gogol dhig u ahaa shirka hada dhacaya .
Shirkii ka dhacay London sanadkii lasoo dhaafay waxaa looga arinsaday arimo farabadan oo quseeya somaaliya , waxaana kasoo baxay arimahan hoos ku xusan .
1 : amniga somaaliya : oo eey ku macneeyeen– Sidii taageero dhaqaale oo joogto ah loogu heli lahaa, ciidamada Amison iyo ciidamada dowlada iyo qeybaha cadaalda .
2 : arimaha siyaasada somaaliya : oo eey ku macneeyeen– Sidii la isugu raaci lahaa waxa ka dambeeyndoona Dowlada ku meel gaarka ah iyo sidii loo sameyn lahaa, gudi mid ah oo maamula dhaqaalada Somaaliya loogu tala galey .
3 : arimaha deganaasho ee somaaliya : Sidii taageero caalami ah oo mideysan loogu fidin lahaa maamulada Somaaliya ka jira .
4: Arimaha La dagaalanka -waxa loogu yeero- Argagixisada: Dib u cusbooneynsiinta dadaaal wadajir ah iyo sidii looga hortagi lahaa khatarta ka imaaneysa Somaaliya
5 : Arimaha Burcad-Badeedda: Sidii dhabarka looga jabin lahaa qaabka burcad-badeeddu u shaqeystaan .
6: –Arimaha Gargaarka Bini’aadamnimo: Sidii dib loogu cusbooneynsiin lahaa wax ka qabadka xaalada bini’aadamnimo ee ka jirta Somaaliya .
7-Arimaha dadaalka wadajirka ah ee caalamiga ah: Sidii la isugu waafaqi lahaa, si wada jir ah wax ka qabashada Arimaha Somaaliya.
Shirkii February ,23, 2012 ka dhacay London waxaa looga arinsaday arimahaas aan kor ku soo xusney , oo ay isweydiin mudantahay intee in le’eg ayey wax ka qabsameen , oo ay iila muuqato in ay ka qabsameen wax aad u yar , waxaa lagu guuleystay arimaha siyaasadeed ee somaaliya , oo laga saarey kumeel gaarkii loona gudbiyey nidaamka federalka , dhabarjabinta burcadbadeeda .
Hadaba markii aad eegto waxa looga arinsandoona shirka ka dhici doona 7 may London, oo uu gogol dhig usii ahaa shirkii horey aga dhacay London , waa ay ku kala duwanyihiin bulshadu aragtidooda.
Qeyb : waxa ay qabaan in ay dan ugu jirto shirarka heerka caalamiga ah oo loo qabanayo somaaliya ayna ka soo qeyb galayaan dawladaha daneeya arimaha somaaliya, ayna dhabar jab ku tahay caddawga lidka ku ah midnimada somaaliya , oo waxa ay muujiyeen dareen uu ku dheehan yahay rajo wanaag iyo himilo fiican .
Qeyb kale : waxa ay qabaan in ay wax dan ah ugu jirin shirarka lagu qabanayo wadanka banaankiisa ummada somaaliyeedna ineysan waxba kusoo kordhineyn , aayaha iyo mustaqbalka ummada somaaliyeed , ayna u baahanyihiin in ay iyagu ka tashtaan arimahooda ,ayna kaga tashtaan gudaha wadankooda .
Hadaba markad eegtid sida ay dadku u hadal hayaan arimaha shirka ka dhici doona London iyo waxa looga arinsan doono , waxa ay u egtahay in ay noqon doonaan ajandayaasha shirku .
1 : dib u eegid lagu sameynaayo waxqabkii hirgalay waxii ka danbeeyey shirkii February 2012 , iyo dib u saxida khaladadkii dhacay
2 : waxaa awooda lagu saari doonaa arimaha bini,aadanimada iyadoo ay somaaliya ka dhacayeen tacadiyo oo u daran oo ay ugu badnaayeen kufsi loo geysanayo barakacayaasha .
3 : ka arinsiga iyo lafo-gurka , dilalka aadka u daran oo lagula kacaayo saxafiyiinta
4 : arimaha maamul usamaynta gobolada jubooyinka
5 : mideynta somaaliya iyo dar-dar galinta wadahadalka u dhexeeya somaaliya iyo somali-land
6: dhaqaale loogu ururinaayo soomaaliya
Waxaa mooda marka aad usii daba gashid in uusan shirku ka agfogeyn ka arinsiga arimaha aan kor kusoo xusney .